Steam Play inowana mitsva miviri mitsva ne4.2-3 uye 3.16-9 | Linux Vakapindwa muropa
Valve uye CodeWeavers vari kushanda nesimba kuti vaenderere mberi kugadzirisa Linux kusanganisa uye zvigadzirwa zvayo. Isu tatozivisa chiziviso chitsva kune iyo Steam Client. Iye zvino zvakare Steam Play yakagadziridzwa neshanduro mbiri nyowani mune yayo portfolio. Kune rimwe divi isu tine yekare Proton nhevedzano iyo yakagadziridzwa neshanduro 3.16-9 iyo inosanganisira yakawanda nhamba yeshanduko diki, senge yekuvandudza yeDXVK kune vhezheni 1.0.2, kururamisa kwemamwe mabugs nemamwe mimwe mitambo yemavhidhiyo yakaburitsa. zvikanganiso kana kutonhora kwesoftware, zviputi zvine chekuita xaudio2, winhttp, nezvimwe.
Kune rimwe divi tinaro Protonisi 4.2-3, iyo inowanikwawo kubva iko zvino kuti unakirwe neshanduko. Mune ino kesi iko kushoma kushoma, mashoma acho, asi imwe neimwe yeshanduko dzakakosha. Chimwe chezvinhu zvitsva kusanganisirwa waini-mono, uye isu tichaona kuti mimwe mitambo mitsva inozotamba sei neiyi nyowani yekuvandudza. Mitambo yaisakwanisa kushandiswa kare, senge yakavakirwa paXNA, Unreal Injini 3, nezvimwe.
Pamusoro peizvozvo, ivo vakawedzerwa mamwe mazita izvo kare zvaisakwanisa kushandiswa neSteam Play uye zvino zvave kugoneka neshanduro nyowani. Semuenzaniso, iwe ikozvino unayo NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja, STORM 4, Evochron Mercenary inowanikwa, pamwe neyakagadziridzwa yeWarframe, nezvimwe. Zera reEmpires II HD rakagadzirisa dzimwe nyaya diki nazvo. Izvi zvese zvinoita sekunakidza.
Isu zvakare tine muProton 4.2-3 iyo nyowani chirongwa chekuvandudza DXVK kusvika 1.0.3 uye FAudio Yakave yakagadziridzwa zvakare kusvika 19.04-13-ge8c0855. Zvidzoreso zvinokanganisa magiraidhi uye ruzha system zvichiteerana. Iyo changelog yakanyanya kuwanda uye isu tine dzimwe shanduko. Tinotarisira kuti izvi zvicharamba zvichienderera, nekuti Steam Play iri kuunza mazita kuLinux ayo aive asiri eepuratifomu yedu uye ndicho chipingamupinyi chikuru chakaputswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Steam Play inowana mitsva miviri mitsva ne 4.2-3 uye 3.16-9
Laminas Project, iyo Linux Foundation inotsigira kuvandudzwa kwePHP zvirongwa zvekushandisa